Vanillyl Butyl kaEtere
VC-IP yi-oli enyibilikayo Vitamin C ithe. Isebenza njenge antioxidant enamandla kunye nearhente ezingwevu, kunye zombini anti-induna futhi anti-ukwaluphala ubunakho. Njengezinye iintlobo Vitamin C, VC-IP inceda ukuthintela ukwaluphala zeselula ngokuthi ziyibuyisela umnqamlezo-Ukuhlanganisa collagen, igcwala of iiprothini, kunye lipid peroxidation. VC-IP nayo isebenza synergistically kunye antioxidant Vitamin E, kwaye iye yabonisa ukufakwa ophezulu percutaneous nozinzo. Izifundo ezininzi yaqinisekisa ulusu nezikhanyisi, photo ...
Igama Product:: Ascorbyl Tetraisopalmitate
Uvavanyo :: 97% min
Ifomula Ezinto:: C70H128O10
VC-IP yi-oli enyibilikayo Vitamin C ithe. Isebenza njenge antioxidant enamandla kunye nearhente ezingwevu, kunye zombini anti-induna futhi anti-ukwaluphala ubunakho. Njengezinye iintlobo Vitamin C, VC-IP inceda ukuthintela ukwaluphala zeselula ngokuthi ziyibuyisela umnqamlezo-Ukuhlanganisa collagen, igcwala of iiprothini, kunye lipid peroxidation. VC-IP nayo isebenza synergistically kunye antioxidant Vitamin E, kwaye iye yabonisa ukufakwa ophezulu percutaneous nozinzo. Izifundo ezininzi yaqinisekisa nezikhanyisi eluswini, photo-zokuzikhusela, kunye neziphumo hydrating VC-IP abanokuzifumana esikhumbeni. VC-IP ingafumaneka kwi iimveliso zolusu ezahlukeneyo ezifana serum anti-ukuguga, unyango iliso, ijel ulusu nezikhanyisi kunye lotions / bagcobe.
Inkangeleko: ezingenambala ekukhanyeni tyheli, engamanzi ngaphaya
ivumba: Iya iimpawu ivumba
ascorbyl tetraisopalmitate kuthenga
abathengisi ascorbyl tetraisopalmitate